Top 15 Fun Android Games inaan la ciyaaro Friends
Ma waxaad u jeclahay inaan u ciyaaro kulan ku saabsan telefoonka smart android? Haddii jawaabtaadu ku raaca, ka dibna aad u farxi doonaa si uu u ogaado in aad hadda kulan super adventurous aad saaxiibadaa ciyaari karaan! Iyada oo ay caanka ah ee kulan android multiplayer, waxaad si fudud u tartami karta saaxiibadaa iyo aad waayo-aragnimo ciyaaraha ka sii fantastic. Halkan waxa ku jira hogaanka 15 kulan android multiplayer xiiso leh in aad isku daydo waa in ay:
1. Asphalt 8: hawada
Haddii aad horey u taageere Asphalt 8, markaas waxaad ahaan doontaa faraxsanahay in ay ogaadaan in aad ka ciyaari karaan kulankaan adventurous xitaa saaxiibadaa. Dhammaan waxa aad u baahan tahay waa xidhiidh LAN ah oo aad ku dari kartaa sida ugu badan 8 horjeeda.
2. Erayga ku dhibo
Haddii aad jeclaan ciyaaro hadalka, markaas ku dhibo, ereygaagu waa doorasho adiga kuu wanaagsan! Iyadoo naqshadeynta wanaagsan iyo codad, dhibo eray bixin ciyaartoyda ay doorasho multiplayer meesha aad la tartami karin asaxaab kuu gaar ah. Waxaad saddex ama afar saaxiibada iyo xitaa la shisheeyayaal ciyaari karo.
Ciyaarta ayaa waxa ay diiradda ku caashaqi jiray kubadda kolayga iyo taageerayaasha. Kulankaan ka mid ah kulamada ugu fiican kubada kolayga ee dukaanka play iyo waxa ay haatan ku siinayaa xarunta inuu ka ciyaaro hab multiplayer aad. Tus xirfadda kubadda koleyga aad ku hor saaxiibadaa iyada oo kulankaan.
4. GT Racing 2: Real Car EXP ayaa
Ciyaarta kama dambaysta ah tartanka baabuurta by Game Loft, GT Racing 2 waa tartanka baabuurta dhabta ah ciyaarta adventurous. Iyadoo naqshadeynta 3D fantastic iyo codad, GT Racing 2 waa mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan kulan tartanka baabuurta ee suuqa. Waxay bixisaa qaababka kala duwan ee taageerada Customization iyo multiplayer taas oo ka dhigaysa ciyaarta xitaa u xiiso badan.
5. godxabsiga Hunter 5
Sii daayo shanaad ee taxanaha RPG caanka by Game Loft, oo godkiina Hunter 5 waa wax horumar ah nuquladii hore ay la ah muuqaalada dheeraad ah oo ku yar. Ciyaarta ayaa ku lug leedahay goob awood hubka iyo godad samaynta ciyaarta ka sii fantastic.
6. kala dhantaalay Brigade
Dhantaalay Brigade waa ciyaar caan ah oo lagu toogtay halkaas oo aad leedahay si ay u dhisaan aad guutada gaar ah weerarka qalcaddiisa. Waxaad samayn kartaa guuto ah oo ah ilaa 12 ciyaaryahan ee ciyaarta.
7. Gun Faa'iido multiplayer
Iyada oo ah interface user la yaab leh, Gun Faa'iido waa ciyaarta kama dambaysta ah toogashada. Iyadoo qaar ka mid ah hubka iyo naqshadeynta u fiican, waxa kale oo aad ku dari kartaa saaxiibadaa in aad ciyaarta.
8. Dib-u-volt 2: ciyaaryahan Multi
Dib-u-volt 2 waa ciyaar tartanka baabuurta aad u fudud oo idinka dhigi doonaa inaad qabsado waqti. Version hore ee ciyaarta ma aysan taageeri hab ciyaaryahan multi laakiin sii daayo ugu dambeeyay kuu ogolaanaya in aad ku darto oo aad saaxiibo ciyaarta. Waxaa jira dhowr ka mid ah baabuurta iyo jilayaal in si fudud loo beddeli karaa at doonayo ciyaaryahanka. Sidaas raaxaysan this ciyaarta tartanka kama dambaysta ah saaxiibadaa oo aan wax lacag ah bixinin hal.
9. Words New la Friends
Words New la Friends waa ciyaar bulshada xirka ee ay Zynga. Kulankaan ayaa aad uula mid tahay erayga kulan u ciyaaray in aad loo isticmaalo in lagu ciyaaro ha ku dabaasho looxaan. In ka badan toban saaxiibo kulankaan wada ciyaari kara kaas oo u reyreyn iyo madadaalo. Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa profile bulshada la ciyaarta oo si deg deg ah u yeedhin saaxiibbadaada. Ciyaarta ayaa sidoo kale waxay bixisaa sheekaynta xarunta si aad sidoo kale la tashan kartaa saaxiib wanaagsan ee xitaa halka ciyaaro.
Jeclahay inaan u ciyaaro su? QuizUp waa ciyaar u gaar ah yacni taas oo guri inay tiro aan xad lahayn oo su'aalo ah. Si kastaba ha ahaatee haddii aad helayso caajisin jawaabay su'aalo oo keliya, sidoo kale waxaad ugu yeeri kartaa saaxiibadaa ciyaarta. Waxaad la tartami karin iyaga iyo jeedsada intaas ka ciyaarta kedis fudud dheeraad ah oo xiiso badan.
11. hirarkii Thunder 2
Hirarkii Thunder 2 weli kulan kale oo tartanka kula fiican naqshadeynta saddex geesood ah. Waxaad heli doontaa in ay ka gudbaan tiro ka mid ah caqabadaha halka tartanka iyo sidoo kale waxaad ugu yeeri kartaa saaxiibadaa in ay la tartamaan idinla. Waxaad kartaa Solo jinsiyad ama kula tartanto saaxiibadaa.
12. jeebka warkii
Haddii aad u jecel kulan tallaabo, markaas jeebka warkii waa ciyaarta multiplayer kaamil ah oo aad u! Kulankaan ayaa markii hore lagu bilaabay for iPad laakiin hayo ay caan ku hay, waxaa la bilaabay loogu dhufto ee kale oo kala duwan oo ay ku jiraan android. Dhagarta ciyaarta waa awaalka iyo aad u fiican naqshadeynta saddex geesood ah, jeebka warkii ka mid ah hogaanka kulan tallaabo lagu qiimeeyo ee Android.
13. Kulanka qabaa'ilka
Kulanka qabaa'ilka ku salaysan yahay kulanka istaraatijiyad lacag la'aan ah android madal. Fikradda ka dambeysa ciyaarta waa in uu ordo aad tuulo u gaar ah oo ka difaaco cadowga. Ciyaarta ayaa waxaa laga heli karaa la feature multiplayer taas oo macnaheedu yahay in aad ugu yeeri kartaa saaxiibadaa aad ka caawiyay in dagaalka.
Dash 14. NinJump
Kulankaan ayaa waxaa si gaar ah loogu talagalay qalabka android iyo gebi ahaanba bilaash ah oo ah qiimaha. Haddii aad horey u taageere u ordaya kulan, ka dibna Dash NinJump waa doorashada ugu fiican ee aad u.
15. rootigii Knight
Kulan hawleed ku salaysan gool super cute ee dib loo soo celiyo rootigii. Kulankaan ayaa aad ku kici doona $ 0.99 oo aad had iyo jeer ugu yeeri kartaa saaxiibadaa si ay kuu caawiyaan dhamaystirka howlgalka.
> Resource > Emulator > Top 15 kulan android xiiso leh inaan la ciyaaro saaxiibo